Wholesale matte frosted tsika girazi rutsanga diffuser kenduru Vessel fekitari uye vagadziri | Winby
matte frosted tsika Girazi reed diffuser kenduru Mudziyo
Yerudo yepepuru ruvara matte frosted Girazi tsika Inonhuhwirira Kenduru Jar / kenduru Midziyo ine lids
1. Iyi kenduru chirongo inogadzirwa negirazi rine chando uye chivharo chemishenjere, iyo yekumisidzana pamusoro yakanaka kwazvo.
2. Iyo kenduru chirongo inogona kugadzirwa neakasiyana saizi & ruvara, isu tinogamuchira vatengi 'zvirevo.
3. Tinogona zvakare kudhinda logo yevatengi pamusoro pemukombe.
Kukura: 6.2cm (Upamhi) * 8.1cm (Kureba) 8.2cm (Upamhi) * 9.8cm (Kureba) 10.2cm (Upamhi) * 13.1cm (Kureba)
frosted girazi zvirongo zvisina makenduru ekuisira ekugadzira makenduru
Iyi girazi kenduru mudziyo ine hukuru hwakasiyana uye mavara. Unogona kusarudza muvara kubva pantone kadhi. Ehe, isu tinogona kupa sampuro sevhisi yako.
Iwe unogona kugadzira mbiru yegirazi kenduru chirongo uye tsanga diffuser mudziyo seyakaiswa, uye shandisa chipo chebhokisi kurongedza, izvo zvinogona kunyatso kuvandudza mhando uye giredhi yechigadzirwa.
Zvakare, iri kenduru chirongo chakasaswa nemvura-yakavakirwa pendi yezvakatipoteredza. Saka zvine hushamwari uye haufanire kunetseka nezvehunhu hwayo.
Yedu inopisa inopisa girazi kenduru ngarava dzakarumbidzwa zvikuru nevatengi vedu uye dzakatengeswa munyika zhinji nematunhu.
Kupedza Chando / matte
Saizi D6.2CM * H8.1CM D10.2CM * H13.1CMM: D8.2CM * H9.8CM
Mashoko Frosted girazi mukombe uye bamboo muvharo
Kurema 175g 225g 450g
Muvharo Chivharo chehuni kana chivharo chemushenjere, logo inogona kutemerwa pachivharo
Ruvara Ichena, nhema, pfumbu, inogona kuvezwa
Kushandisa Kenduru kugadzira / Kumba kushongedzwa
Sevhisi Tsika / ODM OEM / sevhisi sevhisi
Magirazi emakenduru egirazi anogona kugadzirwa mune akasiyana mhedzisiro, se matte, chando, yakabwinyiswa. Unogona kusarudza maitiro aunoda. Ehezve, kana iwe uchida kupurinda yako yega logo kana zvinyorwa pane iyo girazi mukombe, isu tinogona zvakare kuzviita. Iwe unongoda kuti utitumire zvigadzirwa zvako, tinogona kukupa iwe sereferensi.
Pamusoro pe, unogona kusarudza zvivharo zvakasiyana zvezvinhu zvako. Tine muvharo wemishenjere, muvharo wematanda, muvharo wesimbi, ayo akanaka pagirazi regirazi.
Pakupedzisira, nezve kurongedza, isu tinoshandisa emhepo macolumn bubble bhegi kuputira girazi kenduru zvirongo kuti tirege kukuvara panguva yekufambisa. Isu tichadzivirira zvigadzirwa kusvika pamwero wakanyanya, kuitira kuti zvigadzirwa zvigone kuendeswa zvakachengeteka kune vatengi.
Heano mamwe mazwi akanaka kubva kuvatengi vedu:
Pashure: Cotton Kenduru Wick neParafini Wax Yakavharwa
Zvadaro: Anoshongedza 4OZ simbi gaba magaba ekugadzira makenduru
Empty matte girazi kenduru chirongo
Kupisa kutengesa frosted girazi kenduru zvirongo zvine muvharo
500ml Polish girazi kenduru zvirongo
Frosted matte girazi risina chinhu makenduru emidziyo midziyo
Multi-saizi zvakajeka Matte Frosted Glass Kanjera chirongo ...
10oz Spraying Polish girazi kenduru chirongo pamwe bamb ...